2018 Aluminium wooden metal frame yakasimwa soro padanda
Isu tiri sangano rakasiyana-siyana mumusika, tichizvipira kugovera zvakanakisisa 2018 Aluminium wooden metal frame yakasimwa padenga rekuvhara. Yedu yakapiwa 2018 Aluminium wooden metal frame yakagadzirirwa denga rekuvhara ibhuku rinongorongedzerwa richishandisa mabhuku ekutanga uye zvishandiso zvemazuva ano mukuenzanirana nemitengo yemisika. Inopa 2018 Aluminium wooden metal frame yakasimwa soro padhiri ...
2018 Kushongedza kwakagadziriswa aluminium yakange iri mumatombo esirivha
Yakatsigirwa nehupfumi hunyanzvi hwemasimba, takave tichikwanisa kuumba, kugovera nekutengeserana 2018 Kushongedza kwema aluminium yakasimwa yakaiswa mumatombo ecuti. Yakagadzirwa neunyanzvi, zvigadziro zvakagadzirwa neboka revashandi, iro rinobata ruzivo rwakawanda rwechigaro ichi. Pamberi pokutumira kwekupedzisira, yedu yakapiwa 2018 Decorative yakasimudzirwa aluminium yakange iri mumatombo edzimba inoongororwa zvakasimba neboka re ...
mukati mealuminivhu rakazaruka denga denga
Tinopa gumbo remukati re aluminium open siling ceiling like aluminium dari uye denga re plank rinoshandiswa maererano nehuwandu hwemabhizimisi. Yakanyatsokodzera kumashandisirwo akasiyana-siyana emaindasitiri, mukati medu realuminium open open ceiling zviri nyore kuisa. Vatengi vanogona kubatsira variegated mutsara mumasikisi akasiyana uye mavara akavakirwa pane zvavanotaura uye zvakananga zvido. Kufanana chikamu ...
Metal Ceilings Tiles/Vhura Cell Metal Ceilings
2018 Mifananidzo yakashongedzerwa emicheka yakaumbwa nesimbi
Kuti urambe uchifambidzana nevasati vaguma kuguma kwevatengi, kambani yedu inopa hutano hwakanaka hukuru hwe2018 Fashionable aluminium sheet metal metal kune vatengi vedu vanokosha. Iyi 2018 Fashionable aluminiyumu yepurasitiki yechipfigiro inotarisirwa muzvipatara, maresitorendi, zvivako zvehofisi, zvivako, mabhuku uye mahotera. Tinopa ichi chigadzirwa kune vatengi vedu vanoremekedzwa pamutengo unonzwisisika. Tora: Chivako ...
aluminium akamira padenga
aluminium yakagadzirirwa denga rakaiswa inosanganisira kuunganidza zvakanakisisa kunowanikwa muchengeti wepamusoro wemasimbi pamwe chete nemagadzirirwo anofadza uye anofadza anoita izvi zvakasarudzwa uye zvinodaidzwa mumusika. Uyezve, iyo yakagadzirirwa aluminium yakagadzirirwa denga rekuunganidzwa inogonawo kuwanika isu mumagariro ezvakagadziriswa sarudzo sezvinoitika mumatengesi emakwenzi. Tinogonawo tsika ...
Big Discount denga rakaputika clips
Nokuda kwevashandi vedu vakakurumbira tinokwanisa kupa Big Discount padenga chemapuranga emakiti emahofisi, nzvimbo dzakawanda. Izvi Zvikurusa Zvitsva zvinoputika mapepa ari kumabvazuva kuti aise uye agadzire uye akafukidzirwa nekudzivirira kupfeka iyo inogara yakasimba. Izvi Big Discount padenga ...
Hook pane aluminium perforated dari 129
Kuti urambe uchifambidzana nekusava nemagumo ekutengeswa kwevatengi, kambani yedu inopa hutano hwakanaka hukuru hweHook pane aluminium inoshandiswa padenga 129 kune vatengi vedu vanokosha. Iyi Hook paAluminium inoputirwa padenga 129 inodaidzwa muzvipatara, mahoitoro, zvivako zvehofisi, zvivako, mabhuku uye mahotera. Tinopa chigadzirwa ichi kune vatengi vedu vanoremekedzwa pamutengo wakanakira. Tora: Chivako ...
2017 Aluminium inoshandiswa pachidimbu mudenga uye Faux muhuni
Kuverengwa seimwe yemasangano akakurumbira, isu tinobatanidzwa mukupa zvikamu zvakasiyana-siyana zve 2017 Aluminium purogiramu yakakonzerwa mumusoro uye nehuni hwehuni Q. Aya 2017 Aluminium akafuridzirwa chidimbu mudenga neFaux ruvara rwehuni dzinobvumwa nokuda kwekuvakwa kwawo kwakasimba, kuenzana kwakakwana uye kukwirira kwakakosha. Nokuda kwesimba rayo guru uye upenyu hurefu hwehupenyu, idzi 2017 ...
2017 Mushonga grid gomba rekugadzirira kweCanada
Tinova nechinangwa chekugadzirisa zvido zvinowedzera zvevatengi vedu nekuvapa iyo yakavimbika uye yakagadziriswa sarudzo ye 2017 Fashionable grid denga design yeCanada. Kunyatsoshandiswa pakugutsa zvinodiwa nevatengi vedu, zvigadziriswe zvedu zve 2017 Fashionable grid swell design yeCanada zvinorumbidzwa zvikuru pamusika. Isu tinopa iyo basa pamutengo unobatsira pamusika ....
2017 Aluminium yakashongedza nzvimbo yakakonerwa tile
Tiri kupa vateereri vedu vakakurumbira zvakasiyana-siyana zve 2017 Aluminium yekushongedza nzvimbo yakakwirira yekate tile iyo inogadzirwa uchishandisa optimum quality GI ne aluminium. Kuti tive nechokwadi chehutano hwayo, vatariri vehutano vehutano vanoedza iyi sarudzo pamitemo yakasiyana. Kunze kweizvi, isu tinopa hurumende iyi muzvinyorwa zvakasiyana-siyana uye zvigadziro kuitira kuti tibate zvakasiyana siyana zvinodiwa zve ...
2017 Aluminium iron baffle padenga
Sangano redu rakabatanidzwa pakugadzira uye kupa hutano hwakanakisisa hurefu hwe 2017 Aluminium metal baffle padenga rekushandisa. Aya 2017 Aluminium metal inosungisa denga rekufambisa yakanyatsoshanda uye inochengetedza zvivako zvinopa rubatsiro rukuru kumatare akasiyana-siyana emagetsi pamwe chete nekanakonzerwa nekugadzirisa kwayo nyore uye ziso zvinonakidza zvirongwa. Our 2017 Aluminium iron baffle ceiling system are ...
2017 China trade insurance aluminium ceiling baffle
Isu tiri kutungamirira mubatsiri we 2017 China trade insurance aluminium dari yeaffle iyo yakagadzirwa kubva kune yechokwadi yeruminiyumu yesimbi, iyo inogona kuiswa nyore nyore. Aya 2017 China trade insurance aluminium dari bhaffle inowanikwa muhukuru hwakawanda uye maitiro maererano nekunakidzwa kwevatengi vedu. The 2017 China trade insurance aluminium ceiling baffle yakawanda yakaiswa muzvigadzirwa zvemabhizimisi, zvakadai ...
Hot selling aluminium foam roof padding panel
Isu tiri sangano rakasiyana-siyana mumusika, tichizvipira kupa zvakanakisisa Moto kutengesa aluminium pevu padenga padhorosi. Zvatakapiwa Moto kutengeswa aluminium inoputika denga padenga rejeri zvinongogadzirirwa kushandiswa nepamusoro pezvigadzirwa zvemabhuku uye zvishandiso zvemazuva ano mukuenzanirana nemitemo yemisika. Anopa Moto yakatengeswa sale aluminium inopisa denga padenga panoparadzaniswa ne ...
2017 Quality Guaranteed Aluminium Acoustic False Ceiling Board
2017 Quality Guaranteed Aluminium Acoustic False Ceiling Board yakapiwa yakawanda yakaunganidzwa inoitwa muchengeti wepamusoro wesimbi yesimbi pamwe chete nemagadzirirwo anofadza uye anoyevedza anoita izvi zvakasarudzwa uye zvinodzwa mumusika. Uyezve, iyo yakapiwa 2017 Quality Assured Aluminium Acoustic False Ceiling Board collection inogonawo kuwanika isu kuburikidza nekugadzirwa kwakakwana ...
2017 moto-kutengesa metal denga chiremberedzwa chishongo christmas
Sangano redu rakabatanidzwa pakugadzira uye kupa hutano hwakanaka hwehuwandu hwe2017 hwekutengesa moto hwekutsvaira huri kutengesa chishongo christmas. Iyi idzi 2017 inotengesa moto yakasungirirwa yakashongedzwa nemishonga yekrisimasi yakanyatsogadzirisa uye yakasimbiswa zvivako izvo zvinopa rubatsiro rwakakura kune zvakasiyana-siyana zvemagetsi uye pamwe chete nekugadzirisa kushandiswa kwayo nyore uye ziso zvinonakidza zvirongwa. Zuva redu re2017 rekutsvaga resimbi rakarembera ...
4mm Mirror Inogumisa Acp For Design Shape Mirror Aluminium Panel
Kambani yedu inonyanya kukoshesa mukupa 4mm Mirror Kupedza Acp For Design Shape Mirror Aluminium Panel kune vatengi. Tinopa basa iri kumativi akasiyana-siyana, dzimba, uye zvivako zvekuvaka nekugadzirisa denga rekunamata kuburikidza nekushandisa gypsum yakakwirira. Uyezve, iyi 4mm Mirror Inopedza Acp For Design Shape Mirror Inonzi Aluminium Panel Work iri kuitwa pasi pedenga ...
2018 Aluminium acoustic suspended ceiling panels
Tine rubatsiro rwekutengesa kwedu isu tiri kupa vatengi vedu unhu hwakanaka hunozivikanwa 2018 Aluminium acoustic yakagadzirirwa denga padhorosi iyo inofanirwa kune yezvokutengeserana uye yezvivakwa zvekugara uye ine zviyero zvakarurama zvekuisa nyore. Aya 2018 Aluminium acoustic akasimudzirwa padenga padhorosi anotengwa kubva kuvatengesi vakavimbika 'vemusika uyu pasi pekuchenjerera vatengi vedu. Kunze kwaizvozvo...
Shanduro itsva Metal Wood zviyo zvakasununguka kushandiswa kwedanda
Kusimudzirwa kwedenga kunosungirirwa kubva padenga guru kuburikidza nesimbi grids. Mishonga, kana kuti isina tsvina-steel, panels inoshanda zvakanaka nezvigadziro zvakasimiswa. Mashizha emagetsi anowanzouya akachena magetsi. New craft Metal Wood yegorosi yakazaruka senivha inobudisa yakawanda yakakura yepamusoro yezvigadzirwa zvemhando kuburikidza nemuganhu wakazara wekugadzira dzimwe nzira uye kusarudza kushandiswa kweTiles, (Lay in and Clip in), kana ...
Metal cell ceiling, Aluminium yakavharwa pachena yechitima chezvitima
Isu tinobatsira pakupa premium grade Metal cell padenga, Aluminium denga rakazaruka rechitima chezvitima. Yedu yakagadzirwa chigadzirwa yakagadzirwa mushure mekutsvakurudza kukuru nekugadzirisa kugutsa zvinodiwa nevatengi vedu vanokosha. Yedu yakapa Metal cell plailing, Aluminium rakavhurwa rakasununguka reSiteshi chezvitima rinogadzirwa uchishandiswa kuburikidza nemhando dzakanakisisa zvezvinhu zvakasikwa pasi pekuchenjerera kwakanyanya nyanzvi. The Metal Supplied ...
Pvdf coating aluminium metal padhesi yepamusoro pamadziro
Kukurudzirwa neboka revanhu vane ruzivo rwakakura, takakwanisa kugadzira nekupa Pvdf coating aluminium denga denga kuti rive panhizha rusvingo. Izvo zvakapiwa Pvdf coating aluminium simbiya yembiru yepanhi yemadziro inowanzotarisirwa muAirports, Hospitals, Hotels, Lobby, Metro Station, Public Works Areas etc. Rudzi: Kuisa Matairi Nzvimbo Yakabva: Jiangsu, China (Mainland) Zita rekugadzira: .. .
FONNOV, a subsidiary of CAIJING. A dynamic company based in China with business activities related to architectural and industrial materials industry. CAIJING is a shareholder of 3 main businesses on manufacturing svetti svetti & claddings, aluminium extrusions, naizvozvowo powder coatings. FONNOV, sevamwe vashandi, ari mubasa rekutengesa uye kutengesa mune bhizimisi rekumahombekombe.
Vhura Cell Metal Ceilings
2017 kurongedza W300 chivako chivako chepandro
Tsvina yechina yakasimiswa
Inonzi soundproof yakagadzirirwa aluminium expanded metal ceilings
Trade assurance 600 * 600 denga resimbi yekuvaka zvivako
Yakanaka yeforforated aluminium panel yekunaka kwekunze muChina
10 Makore Akawana moto unonzi aluminium inopisa mujecha rekushaira 2 'x 2' neGSS